Tag: zana-pejy | Martech Zone
Tag: pejy kely
Talata, Febroary 13, 2018 Talata, Febroary 13, 2018 Douglas Karr
Izahay dia miasa amin'ny fampiharana sarotra be ho an'ny mpanjifa orinasa izao. Ny tranokala dia miorina amin'ny WordPress fa manana lakolosy sy siotsiôna iray taonina. Matetika, rehefa manao an'io karazan'asa io aho dia tiako ny tehirizina ny kaody manokana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ireo tranokala hafa. Amin'ity tranga ity, nieritreritra aho fa tena mahasoa izany asa izany, te hizara an'izao tontolo izao aho. Mampiasa ny lohahevitra Avada WordPress izahay